Ma waxaad weli baranayaan sida loo isticmaalo canabka si sax ah? Ma jeclaan lahayd inaad badan oo ku saabsan codsiga bulshada-warbaahinta tan bartaan? Gaar ahaan, aad jeclaan lahayd inaad wax badan oo ku saabsan sida loo isticmaalo ee iPad u bartaan? Markaasay aad u yimaadeen inay meel sax ah. Maqaalkani waxa uu kaa caawinayaa inaad fahamto tallaabooyinka aasaasiga ah ee ku saabsan sida loo isticmaali canabka on your iPad iyo si ka badan. Dhammaan waxa aad u leedahay in la sameeyo marka la akhriyo on si aad u bilowdo.
Qaybta 1aad: Sida loo soo dajiyo iyo kala saxiixday Up
Qeybta 2: Sida loo abuuro A canabka Video
Qeybta 3: Sida loo badbaadi canabka Videos aan Daabacaadda Them
Qeybta 4: canabka App lagu bedelan karo, waayo, iPad
Hadda oo aad hayso wax fikrad ah sida waxa canabka waa aan hadda tegi kartaa rakibidda codsigaaga canabka on iPad. Taas ka dib, waxaan ka wada hadli doonaan sidii ay u saxiixdo codsiga iyo sidoo kale.
Talaabada Koowaad: Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala soo baxdo codsiga laftiisa hore. Waxaad kala soo bixi kartaa canabka halkan.
Tallaabada Labaad: Ka dib markii ay soo degsado, waxaad sii wadi karo si loo soo dajiyo codsiga aad iPad. Taas waxaa la samayn doonaa si toos ah sida ugu dhakhsaha badan waxaad kala soo bixi codsiga. Taas ka dib, aad haatan la abuuro kartaa qof online dhex canabka iyadoo la abuurayo xisaab adiga ku gaar ah. Waxaad sameyn kartaa tani u saxiixay in aad aqoonsiga Twitter ama xisaab bilowdo ka xoq. Keenista aqoonsiga ka xisaabtaada Twitter noqon doono inta badan ka sahlan.
Talaabada Sadexaad: Ka dib dejinta xisaab, aad haatan gali kartaa sawirro aad iyo faahfaahin ku saabsan naftaada. Waxaad ku qor kartaa in aad magacaaga iyo sidoo kale sharaxaad gaaban ee qofka aad tahay iyo meesha aad joogto. Profile ayaa sidoo kale goobaha menu ah in idin ​​siin doonaa helitaanka macluumaadka la xiriira xisaabta sida aad email, lambarka guriga iyo kan sirta ah. Iyadoo menu goobaha, waxa kale oo aad ku xiri kartaa xisaab Twitter iyo Facebook danbe.
Ka dib markii ay kor u saxiixay, aad haatan sii wadi karo in la abuuro video ah Canabka kuu gaar ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan tahay in la raaco:
Tallaabada Koowaad: Waxaad ku samayn kartaa siyoodba Video icon Fallaadha gan, oo ku saabsan dhinaca kore ee midig ee shaashada. Ka dib markii aan sidaa yeelno, waxa aad bilaabi kartaa tafatirka, rasaas iyo soo bandhiga aad aad u gaarka ah videos. Your iPad qaadan doonaa faa'iidaystaan ​​fursadaha camera ah si aad u awoodo in ay toogtaan oo badbaadiyo videos for tafatirka ka dib on.
Tallaabada Labaad: Marka aad ka jaftaa Fallaadha gan, Video icon ah markii ugu horeysay ka tutorial video gaaban arbushin doonaa inaan idin ​​baro sida loo toogan video aad iPad. Tani waxay fududeyn doontaa in aad fahamto sida si fiican wax u isticmaali fursadaha aad canabka.
Taas ka dib, waxaad sii wadi kartaa video toogtay. Just farta camera aad on hawlaha wax xiiso u leh in aad arki kartaa inta lagu jiro maalintii oo sii toogashada.
Tallaabada Saddexaad: Si aad ugu qortid video, qaban fartaada shaashadda halka toogtay. Marka aad sii daayo fartaada, waxaa la joojin doonaa toogashada. Markaasay aad u guurto karaa in maaddo oo kala duwan ama xagal.
Marka aad ka gaadhay xadka lix labaad, fursadaha qaybsiga lagu dhisayaa doonaa shaashadda. Markaas Waxaad dooran kartaa inay u wargeeyaan Facebook ama Twitter. Haddii aadan rabin inay u wargeeyaan on ka mid ah xisaab bulsho-warbaahinta, halkan waxa aad samayn lahaydeen.
Tallaabada Koowaad: ka dib markii aad videos, guji soo socda.
Tallaabada Labaad: Markaas waa in aad gab dhammaan fursadaha video qaybsiga si ay u dami.
Tallaabada Saddexaad: dibna riix "samayn".
Your videos hadda u guureen aad camera oo duudduuban. Haddii ay dhacdo in this aan shaqaynayn, waayo, waxay ka dhigan tahay in adiga oo aan si guul leh demiyo fursadaha la wadaago oo dhan. Si taa loo saxo, kaliya dib ugu noqoto bilowgii iyo raac tilmaamaha isku mar.
Haddii aad rabto in aad si ay u sahamiyaan codsiyada kale ee aad iPad in ay la mid tahay canabka, sababta ma waxaad isku dayi ha Viddy . Tani waa qalab kale video qabsaday in shaqayn karo sidii doorasho kale haddii aad rabto in aad isku daydid wax ka duwan canabka.
Tani waxay sidoo kale waa codsi ah oo lacag la'aan ah in aad kala soo bixi kartaa via App Apple Store ama Google Play. Waxaa ka shaqeeya si la mid ah sida canabka. Waxaa sidoo kale diyaar u ah iPhone iyo iPod Touch gees uga leexan iPad. Faa'iidada in uu leeyahay in ka badan canabka waa in aad yeelan doontaa in ay badbaadin dheer videos (30 seconds) arjigan.
Sida canabka, waxa kale oo aad la wadaagi karto iyo edit aad videos oo aan wax mashaakil la isticmaalayo Viddy. Waxa kale oo aad ogaan kartaa videos kale posted by dadka kale ee isticmaalaya codsigan. Tani waa sababta ay tahay in aad ka waaban sida ugu dhakhsaha badan si aad u hesho nuqul aad u gaarka ah ee codsiga. Ma noqon doonto in aad awoodid in la wadaag saaxiibadaada videos, xitaa haddii aadan haysan canabka.
Kuwaasi waxay yihiin qaar ka mid ah tallaabooyinka ay tahay in aad raacdo haddii aad rabto in ay ku shaqeeyaan oo canabkiinna isticmaalaya iPad. Arintanina waa ay sahlan tahay ilaa iyo inta ay tahay in aad kala soo bixi codsiga dukaanka laftiisa awoodaan.
Sidii hore loo soo xusay, Casharrada ayaa video gundhig gudahood codsiga sidoo kale kaa caawin doona inaad ka badan oo ku saabsan sida loo isticmaalo si habboon dib u dhac kasta oo aan wax ku bartaan. Sidaas oo dhan inaad sameyso waa in tuubada biqil video icon ka screen iPad iyo wax kasta oo kale raaci doonaan. Waxaa laga yaabaa inaad si aad u daawato video tutorial ah.
Sidaas waxa aad sugayso? Ka hor taga oo u soo bixi App geedka canabka ah oo hadda ka hor ay goori goor tahay. Runtii waxaan idinku leeyahay in aadan ka xumaan doonaan waxan u samaynaysaan dhaqsiyaha badan uu. Waxaad xaqiiqo ku raaxaysan doonaa iyadoo la isticmaalayo foomkan codsiga maadaama si joogto kartaa hawlahaas.
> Resource > iPad > Sidee loo Isticmaalaa canabka Wixii iPad